Famaritana ho an'ny fantsom-boasary cryogenika amin'ny varingarina entona voasesika
Ny firafitry ny tavin-drano dewar
Ny tanky anatiny sy ny akorany ivelany an'ny Dewar dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony, ary ny rafitra mpanohana tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hanatsarana ny tanjaka ary hampihena ny fihenan'ny hafanana. Misy sosona insulated hafanana eo anelanelan'ny tanky anatiny sy ny akorandriaka ivelany. Fitaovana fanamafisana hafanana marobe sy sosona avo lenta miantoka ny fotoana fitehirizana rano. Ny vaporizer efa namboarina dia namboarina tao anaty akorany mba hanovana ny ranona cryogenika ho lasa gazy, ary ny supercharger namboarina dia afaka mampitombo ny tsindry amin'ny tsindry efa voafaritra mialoha ary hitazomana azy io mandritra ny fampiasana azy, hahatratrarana ny tanjon'ny fampiasana haingana sy maharitra. Ny varingarina misy gazy voaroaka tsirairay dia manana firafitra peratra vy (peratra fiarovana) hiarovana ny fantsona. Ny peratra fiarovana dia ampifandraisina amin'ny varingarina misy fononteny efatra, ary ny fononteny tsirairay dia asiana potika mba hanamorana ny fampiasana trolley sy crane hitondra ny varingarina entona. Ny faritra miasa rehetra dia apetraka eo an-tampon'ny varingarina entona ho mora ampiasaina. Ao anatin'ny tontolon'ny fampiasana tsy miankina, ny mpampiasa dia afaka mifehy tsara ny fizotran'ny fampiasana amin'ny alàlan'ny valizy fandefasana, valizy fanamafisam-peo, fandrefesana faneriterena, valizy amin'ny rano, sns Mba hahazoana antoka fa eo ambanin'ny tsindry fiarovana ny valizy anatiny ao amin'ny varingarin-tsolika, dia apetraka ao amin'ny varingarin-tsolika ny valizy fiarovana sy ny kapila mampandeha azy.
Fampiasana sy toetra mampiavaka ny fonosan'ny dewar
Izy io dia ampiasaina hitaterana sy hitehirizana ranon-javatra cryogenika toy ny oksizenina ranoka, azota azota, argon ranon-javatra, dioksidan'ny gazy karbonika, LNG, sns. Ny silinder entona azo ampiasaina hamatsiana entona misy gazy na gazy. Mora ampiasaina ny varingarina entona, azo antoka sy azo antoka, ara-toekarena ary maharitra. Ireto misy fiasa manokana: 1. Ny rafitra fanohanana ny tanky anatiny dia vita amin'ny vy tsy misy fangarony hahatratra ny tanjon'ny fihenan'ny hafanana ambany sy ny tanjaka avo. 2. Mora ampiasaina izy ary afaka miasa tsy miankina amin'ny olona tokana. 3. Tehirizo ranoka cryogenika madio. Fahafahana mitahiry lehibe. Ny fahafaha-mitahiry gazy amin'ny varingarin-tsolika dewar DP175 dia mitovy amin'ny mihoatra ny 18 heny ny fitahirizana entona amin'ny varingarina entona misy tsindry avo be 4. Ny tsindry anatiny amin'ny varingarin-tsolika dia hiakatra mandritra ny dingan'ny famonoana aorian'ny famenoana. Ny varingarina entona dia manana rafitra fanamafisam-peo avo lenta, ary ambany ny tahan'ny fiakaran'ny tsindry. Amin'ny toe-javatra mahazatra, tsy ilaina ny mampihena ny tsindry amin'ny alàlan'ny valizy fiarovana. 5. Ny supercharger sy vaporizer namboarina dia afaka mahatsapa famatsian-tsolika na ranon-javatra mitohy, ary tsy ilaina ny mametraka vaporizer ivelany eo ambanin'ny fatra natao.
Indostrian'ny gazy Subpackage
Fanamarihana: Rehefa mameno gazy voajanahary dia ampiasao valves fiarovana indroa ary esory ny kapila vaky ao anaty tanky anatiny.
Mitandrema anefa: Ny fanitsiana ny bolt ambony amin'ny valizy mifehy ny tsindry mitambatra dia tsy hisy fiantraikany amin'ny fanafainganana ny hafainganana fanerena. Ny fanitsiana ny bolt ambony an'ny valizy mifehy ny tsindry mitambatra amin'ny sitrapo dia hiteraka fifehezana tsindry miaraka. Simba ny valizy.
Valizy mifehy mifehy ny tsindry: Ity valva ity dia manana fiasa roa amin'ny famerana tsindry sy ny fitsitsiana rivotra. Rehefa manindry, ny ranona cryogenika ao anaty tavoahangy dia navadika ho setroka feno alaina avy amin'ny coil pressurizing, ary avy eo miverina amin'ny habakabaka amin'ny faran'ny entona amin'ny alàlan'ity valva ity, ka manome tsindry maharitra sy maharitra ao anaty varingarina. Rehefa mampiasa gazy, ny gazy misy tsindry loatra ao amin'ny habakabaka ao an-tampon'ny varingarina dia alefa any ivelany amin'ny alàlan'ity valizy ity mba hisorohana ny fahaverezan'ny entona vokatry ny fisokafan'ny valizy azo antoka noho ny tsindry entona be loatra. Ny teny hoe masoandro dia mandeha ho azy tsy misy fandidiana tanana.
Valizy fampiasana entona: Ity valizy ity dia mifamatotra amin'ny vaporizer namboarina, izay ahazoana gazy manafotra. Mila mpampifandray CGA mifanaraka amin'ny gazy omen'ny kaontenera izy io.
Valiny miditra sy mivoaka: Ity valizy ity dia ampiasaina hifehezana ny famenoana sy ny famoahana ranon-dronogenika. Ny mpampiasa dia afaka mifandray amin'ny fantsom-boaloboka CGA eo alohan'ny valva amin'ny alàlan'ny fantsom-panafody manokana, Manatanteraka ny famenoana sy ny famoahana ireo varingarin-tsolika.
Valve fampiroboroboana: Ity valva ity dia mifehy ny fizaran-tany booster. Sokafy ity valizy ity mba hanerena ny tavoahangy.
Valantsara: Ity valizy ity dia mifandray amin'ny habaky ny entona ao amin'ny varingarina entona. Ny fanokafana ity valva ity dia afaka mamoaka ny gazy ao anaty varingarina ary mampihena ny tsindry.
Fitaovana fanerena: Mampiseho ny tsindry amin'ny varingarina entona, ny kilao dia kilao isaky ny santimetatra toradroa (psi) na megapasikaly (MPa).
Fatra refy: Ny refin'ny haavon'ny varingarina dia fantsom-boaloboka mitsingevana karazana lohataona, izay mampiasa ny fisondrotan'ny ranon'ny cryogenika hanondroana ny ranona cryogenika ao anaty Faharana varingarina. Fa tsy maintsy lanjalanjaina ny fandrefesana marina.
Fitaovana fiarovana: Ny valin'ny varingarina dia namboarina tamin'ny valizy fiarovana ambaratonga voalohany sy kapila famotehana ambaratonga faharoa hiarovana ny varingarina rehefa manindry mafy. (Amin'ny tranga mavesatra loatra) dia misokatra ny valizy fiarovana, ary ny asany dia ny famoahana ny fiakaran'ny tsindry vokatry ny fahaverezan'ny hafanana hafanana ny sosona sy ny fanohanana, na ny fiakaran'ny tsindry vokatry ny famoahana hafanana hafainganam-pandeha aorian'ny fantson'ny ny sosona sandwich dia simba ary ao anatin'ny toetry ny afo. Rehefa tsy mahomby ny valizy azo antoka, dia hisokatra ny kapila mipoaka hamoaka ny tsindry hiantohana ny fiarovana ny varingarina entona.
Fanamarihana: Rehefa mameno gazy voajanahary dia ampiasao valves fiarovana indroa ary esory ny kapila vaky ao anaty tanky anatiny. Ny fiarovana ny fefy ao anaty toe-piainana mihoampampana dia azo atao amin'ny alàlan'ny fantsom-bovoka. Raha mivoaka ny tanky ao anaty (miteraka tsindry interlayer avo loatra), hisokatra ny tsindry hampidina ny tsindry. Raha mivoaka ny plug vacuum dia hitarika amin'ny fanimbana ny banga interlayer izany. Amin'izao fotoana izao dia "hatsembohana" sy fanala amin'ny akorany no hita. Mazava ho azy fa ara-dalàna ny fanala na fanala amin'ny faran'ny fantsona mifandray amin'ny vatan-tavoahangy.
fampitandremana: Fady mafy ny mamoaka ny banga amin'ny toe-javatra misy.
Fanamarihana: Ny kapila fikorontanana dia azo ampiasaina indray mandeha ihany. Ny kapila vaky dia tsy maintsy soloina aorian'ny fihetsika nataony. Azo vidiana amin'ny orinasanay.
Previous: Cylinder Oxygen Oxygène
Lng Cryogen Tank
Lng Tank Type